Celtra: gbanye akpaaka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Saturday, March 21, 2020 Fraịde, Machị 20, 2020 Douglas Karr
Dabere na Forrester Consulting, na nnọchite Celtra, 70% nke ndị ahịa na-etinyekwu oge ịmepụta ọdịnaya mgbasa ozi dijitalụ karịa ha ga-ahọrọ. Ma ndị zaghachiri kwuru na imepụta ihe eji emepụta ihe ga-enwe mmetụta dị ukwuu n'ime afọ ise na-esote na usoro okike mgbasa ozi, yana mmetụta kachasị na:
Olu nke mkpọsa mgbasa (84%)
Vingkwalite usoro / arụmọrụ arụmọrụ (83%)
Imeziwanye ihe okike (82%)
Vingkwalite ogo ihe okike (79%)
Kedu ihe bụ Creative Management Platform?
Nhazi ihe okike (CMP) na - ejiko ihe ngosi di iche iche nke ngosi mgbasa ozi nke ndi ahia na ndi okacha amara n’ile ahia n’otu ikpo okwu. Ngwaọrụ ndị a gụnyere ndị na-ewu ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịme ihe siri ike n'ọtụtụ, mbipụta ọwa obe, yana nchịkọta data na nyocha ahịa.
G2, Nhazi nyiwe okike
Celtra bụ a Nchịkwa Creative Management (CMP) maka ịmepụta, imekọrịta na, na ịbawanye mgbasa ozi dijitalụ gị. Ihe okike, mgbasa ozi, ahia, na ndi otu ulo oru nwere otu ebe iji bulie mkpọsa na ihe okike sitere na ngwa ọrụ uwa na mgbasa ozi mpaghara. N'ihi ya, ụdị nwere ike ịbelata oge imepụta ma belata oke njehie.
Gafee osisi, anyị ahụla ahịa na ndị otu okike na-agba mgba mgbe a bịara n'ịmepụta, ịmịpụta ma wepụta mkpọsa ahịa n'ọtụtụ. Ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ Creative Operations na-achọsi ike ngwanrọ iji melite arụmọrụ usoro, arụmọrụ, ogo na mkpa nke nrụpụta ha.
Mihael Mikek, Onye guzobere & Chief Executive Officer nke Celtra
Ọ bụ ezie na ụdị na-agbasi mbọ ike iji gboo mkpa okike nke mgbasa ozi na mgbasa ozi nke oge a, data ahụ gosipụtara ọtụtụ ihe ngwọta nke ga-arụsi ọrụ ike mejupụta ọdịiche na usoro ha ugbu a ma jee ozi mpaghara ndị ụzọ ha dị ugbu a na-ekpuchighị. Mgbe ị na-eche maka ikike nke ga-akacha kwado ihe e kere eke na mgbasawanye nke ọdịnaya mgbasa ozi dijitalụ, ndị chọrọ ịchọrọ:
A ikpo okwu na-agbako iji mepụta mmepụta, arụmọrụ na arụmọrụ (42%)
Ihe okike okike nke na-agbanwe site na data (35%)
Usoro arụ / ule (33%)
Otu-pịa okike nkesa gafee nyiwe na ọwa (32%)
Oru ngwụsị ngwụcha maka ọtụtụ ihe okike dijitalụ (30%)
Key Celtra Atụmatụ Gụnye:
Mee ya - Mmepụta okike nke emere eme ma na-eme ka data na-arụ ọrụ. Ihe ikpo okwu a bu igwe ojii maka ihe eji emeputa ihe. Ndị na-ewu ụlọ ọrụ ihe omimi na ndị na-ewu vidiyo nwere ụmụ amaala, ahụmịhe mmekọrịta. Ejiri atụmatụ na ndebiri ndebiri (QA) dị na ya.
Jikwaa ya - Nwee ikike zuru oke na mmepụta ihe okike dijitalụ gị yana arụmọrụ arụmọrụ site na ikpo okwu etiti igwe ojii. Ngwa ọrụ mmekorita anya na ntọala na nyocha na-esonye maka usoro nhazi mgbasa ozi. Enwere ike ibute ikike a na-enweta na ngwaahịa na ụdị. Nkesa dị n'ofe mgbasa ozi na nyiwe mmekọrịta mmadụ na njikwa njikwa ọrụ mgbasa ozi zuru oke yana mwepụta ikpo okwu zuru oke na nchịkọta teknụzụ mgbasa ozi.
Tụọ ya - Nchịkọta data okike chịkọtara ọwa iji weta data arụmọrụ na ndị otu okike ma nye ndị otu mgbasa ozi ihe okike. Ikpo okwu nwere ngosipụta ọkọlọtọ na usoro vidiyo, onye nrụpụta akụkọ na nyocha site na dashboard. Enwekwara nnukwu mbupụ ma ọ bụ ịkọ akụkọ API maka ijikọta nsonaazụ arụmọrụ.
Tags: mgbasa ozimgbasa ozi okikeCeltracmpKedu ihe bụ cmp
Chọta Mmetụta Gị: Mepụta Mkparịta ụka Global nke sitere na ọdịnaya sitere n'ike mmụọ nsọ